Root Explorer 4.5.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.5.2 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း Root Explorer
Root Explorer ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
root explorer ကိုအမြစ်အသုံးပြုသူများသည်အဆုံးစွန်သောဖိုင်မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။ (အခက်ခဲနေဒေတာဖိုင်တွဲအပါအဝင်!) android ရဲ့ file system ကို၏တပြင်လုံးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှု။
အင်္ဂါရပ်များအများအပြား tabs များ, Google Drive ကို, သေတ္တာ, Dropbox နှင့်ကွန်ရက် (SMB) အထောက်အပံ့, SQLite database ကို viewer, စာသားအယ်ဒီတာ, ဖန်တီးထုတ်ယူဇစ်သို့မဟုတ်ကတ္တရာ / gzip ဖိုင်များ, RAR မော်ကွန်းတိုက် extract, Multi-ကို select လုပ်ပါ, script များ execute, ရှာ, remount, ပါဝင်သည် ခွင့်ပြုချက်, စာညှပ်များ (စသည်တို့ကိုအီးမေးလ်, bluetooth ကနေတဆင့်) ဖိုင်များစေလွှတ်မည်, image ကို thumbnail ရဲ့, APK binary XML အ viewer, ပြောင်းလဲမှု file ကိုပိုင်ရှင် / အုပ်စု, သင်္ကေတလင့်ခ်, "ပွင့်လင်းမှုနှင့်အတူ" စက်ရုံ, MD5 ဖန်တီး, Shortcuts တွေကိုဖန်တီးပါ။
အစာရှောင်သည်, ဖော်ရွေထောက်ခံမှုရိုးရှင်းစွာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့: support@speedsoftware.co.uk
ကျနော်တို့ကအမြဲသင် app ကိုအတူရှိစေခြင်းငှါမဆိုပြဿနာနှင့်အတူကူညီဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ သို့ဖြစ်. အသင်ကငွေပြန်အမ်းရှိနိုင်သည်မကူညီနိုင်လျှင်အဘယ်သူမျှမမေးခွန်းတွေမေးတယ်။
ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်လူအများစုအလွန်ကျေနပ်မှုဖောက်သည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့ပြောပြကြလိမ့်မည် 22,000+ ပေမယ့်။ သင်လူအများစု App ကိုစဉ်းစားအရာကိုကောင်းတစ်ခုစိတ်ကူးရမှတတ်နိုင်သမျှအများအပြားမှတ်ချက်များဖတ်သေချာပါစေ။
ကျနော်တို့နေဆဲဟောင်း 24 နာရီပြန်အမ်းငွေမူဝါဒကိုလေးစားပါတယ်။ သင် app ကိုအတူမပျော်ရွှင်မယ်ဆိုရင်ဒါရုံ 24 နာရီအတွင်းကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းနှင့်သင်ကငွေပြန်အမ်းများရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်သင် download လုပ်သည့်အခါ Google ကသင့်အားပေးပို့သောအီးမေးလ်များကိုအပေါ်ကိုရှာတှေ့နိုငျသောအမိန့်နံပါတ်, သိရန်လိုပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်ကြောင့်အလျှော့? မူရင်း Get နှင့်အကောင်းဆုံး!
အပြည့်အဝ network ကိုအသုံးပြုခွင့် - ကွန်ယက်နှင့်မိုဃ်းတိမ်သည် access ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သော။ အဘယ်သူမျှမသတင်းအချက်အလက်အင်တာနက်ကိုကျော်ကျွန်တော်တို့ကိုကူးမြောက်သည်။
အကောင့် Add သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန် - တပ်မက်လိုချင်သောအလျှင်အကောင့်သစ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ကို Google Drive ကို SDK ကိုအသုံးပြု။ အပြောင်းအလဲမရှိပါလက်ရှိအကောင့်နဲ့အကောင့်အမည်ကိုကင်းဝင်ရောက်မျှမကအသေးစိတ်စေကြသည်။
device ကိုအပေါ်အကောင့်ကိုရှာပါ - Google Drive ကိုသို့ logging ရရှိနိုင်ပါသည်အကောင့်အသစ်များ၏စာရင်းပြုစုရန်တစ်ပတ်ရစ်။
အိပ်ထဲကနေကာကွယ်တားဆီး - သူတို့ Interrupted မဟုတ်ပါဘူးဒါရှည်စစ်ဆင်ရေးအတွင်း device ကိုအိပ်ရပ်တန့်ဖို့တစ်ပတ်ရစ်။
Root Explorer အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Root Explorer အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Root Explorer အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Root Explorer အား အခ်က္ျပပါ
mark8 စတိုး 1.13M 551.41M
Root Explorer ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Root Explorer အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.5.2
ထုတ်လုပ်သူ Speed Software
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.speedsoftware.eclipse.co.uk/privacy/root_explorer_privacy.html
Release date: 2019-08-05 16:35:57
လက်မှတ် SHA1: C0:5A:7B:EA:A0:D6:8F:AA:40:73:1C:62:28:BB:C2:60:59:6E:21:E8
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Colin Speed
အဖွဲ့အစည်း (O): Speed Software
နယ်မြေ (L): Dawlish
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Devon
Root Explorer APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ